भूकम्पले देखायो भगवानका दूतहरुको सक्कली अनुहार जोतिसधन्दे भागे , येशु परमेश्वर बोलेनन् - Nepal News - Latest News from Nepal
भूकम्पले देखायो भगवानका दूतहरुको सक्कली अनुहार जोतिसधन्दे भागे , येशु परमेश्वर बोलेनन्
भूकम्पले घरहरु जगैदेखि हल्लायो र घरसँगै हल्लिँदा हंस हल्लिएका घरबासीहरु अत्यासको मुद्रामा घरै छाडेर बाहिर निस्के । र, डरले गाँजेको वातावरणमा कारुणिक कोलाहल छायो । जब भूकम्पले मथिङ्गल हल्लायो, भगवानका दूतहरुको कलाहीन अभिनय गरिरहेका बन्धुहरु गोजेरा भर्ने आ-आफ्ना धन्दा छाडेर दूला-दूलामा लुसुक्क लुके । खुल्दुली भरिएका आँखाले टेलिभिजनका काँचका पर्दाहरुमा खोजेँ, त्यहाँ यिनका नाकमुख कतै देखिएनन् ।
तिनका चित्तको पन्तुरोमा यस्ता पाँच-सातवटा कुरा हुँदा हुन् । तिनले भाग्य हेरिमाग्नेलाई तिनै कुरा आलोपालो गरी बाँडिदिन्थे । दिनदिनै गुरुजीका बासी वचन सुन्ने अन्धमति मनुवाहरुले पत्याइदिएपछि कसको के लाग्छ ? यसरी तिनको अज्ञानीहरुलाई अन्धविश्वास बेचिखाने धन्दा गजपले चलेको थियो ।
भूकम्पअघि टेलिभिजन च्यानलहरुमा बिहानैपिच्छे धार्मिक प्रवचनहरुको प्रतिस्पर्धा चल्थ्यो । काँचका पर्दामा धार्मिक प्रवचनमार्फत् भक्तहरुलाई स्वर्ग जाने टिकट काटिदिने ब्रह्मज्ञानीहरुको बिगबिगी थियो । तिनमा एकजना एक छाँटका मनुवा थिए । छरिएको ठीकै लामो मुलायम कपाल, सुहाउँदिला दाह्री-जुँगा, बान्की परेको मुखाकृति, चञ्चल र तिर्खालु आँखा, चटपटे व्यवहार र बित्पाते हाउभाउ । ती धार्मिक प्रवचकभन्दा पनि बलिउडको नक्कलेे हिरोजस्ता लाग्थे । तिनमा शालीनता कम र ढोँगी आत्मप्रदर्शन बढी गोचर हुन्थ्यो ।
बिहान सबेरैको घुमघामपछि मैले नित्य कालो कफी खाने पसलको छेउमा एकजना टीठलाग्दा बाजे डेरा गरी बस्थे । हनुमान चालिसाको प्यार प्यार रटना तिनको प्यान्टे भुँडी भर्ने सजिलो धन्दा थियो । धन्दा खुबै चलेको थियो । खासगरी अस्पताल जाने औकात नभएका नारीहरु तिनकहाँ आउँथे । हँसीखुशी सुन्नाराम टाइपका बाजे बडो फुर्तिसाथ कुचाले तिनका आङ बढारेर रोगलाई धूलामा झार्ने अभिनय गर्थे । ती फोक्सो फुलाउँदै फु-फुको फुङ्कार पनि गर्थे । तिनका मुखबाट लट्टे पड्किएझैँ ‘टोइट्, बइट्, छइट्, लइट्, हइट्’जस्तो अस्पष्ट स्वर सुनिन्थ्यो ।
पहिलो भूकम्पको चौथो दिन म मृगस्थलीमा बिहानी घुमघाम सकेर चिया पसलमा हाजिर भएँ । अगाडि यसो हेर्छु त सटर बन्द छ । हुनुपर्ने ठाउँमा हनुमानभक्त बाजे छैनन् । पसल्नी बहिनीलाई सोधेँ, ‘नानी, खोई हाम्रा हनुमानजी ?’
‘त्यत्रो जान्ने पनि डराए त ?’
मनमनै भनेँ, ‘बराबिचरा हनुमान बाजे ! तिनको दुःख तिनका मनचिन्ते हनुमान देख्दैनन्, खतरा भूकम्प सुन्दैन ।’
यी सब कहाँ लुकेका थिए, यिनले केही भनेनन् ? यी डरले कट्टु भिजाउँदै कुद्दा यिनका भगवान के हेरी बसेका थिए, यिनले केही जानेनन् ।
हामीलाई भूकम्पको भमुरीमा पारेर तिमीहरु कता लापता भएका थियौ भनेर भक्त-भक्तिनीहरुले तिनलाई सोध्ने आँट गरेनन् । टेलिभिजनका मालिकहरुले काँचका पर्दाहरु प्रदान गरे र पर्दैपिछे अन्धविश्वासका पसल थापेर ग्रहदशा हेर्ने, रोग झार्ने र स्वर्गका टिकट बेच्नेहरुको धन्दा पूर्ववत् चालु भयो ।
आश्चर्य, उता सीतापाइलाको धराप भवनबारे पनि प्रभु यशु पूरापूर उदासीन ! भवनको अवस्थाबारे भक्तगण यशुलाई बेलैमा नसोध्ने, यशु भक्तगणलाई करुणाभावले भवनको जर्जर अवस्थाबारे नभन्ने । त्यसैले त हुनु हुनामी भयो । बर्बादै भयो ! कपनको भवन गर्ल्याम्म ढल्यो, २९ जना भक्तले ज्यान गुमाए र थुप्रै घाइते भए ।
जब इसाईपथका भक्तहरुको ठाउँठाउँमा भुसुक्कै ज्यान गयो, यो पन्थका प्रचारकहरु पनि आफ्ना ज्यान जाने डरले कतै दूलामा लुके । र, दुई-ढाइ हप्तापछि परिस्थितिको गन्ध सुँगेर ती पनि हिन्दुपथका भगुवा ज्ञानीहरुझैँ फुत्त बाहिर निस्किए ।
भूकम्पपछि एउटा टेलिभिजनको काँचको पर्दामा इसाई पथका एक जण्ड प्रचारक प्रकट भए । तिनलाई ध्यानदृष्टिले हेरेँ, एकाग्र चित्तले सुनेँर म त्यसैत्यसै आश्चर्यचकित भएँ । प्रचारक मङ्गोल बान्कीका छन् । ती तन्नेरी छन् । तिनको शरीर सुगठित र बलिष्ठ छ । ती टाई-सूटमा सजिएर इसाई धर्मको प्रचार गर्न अघि सर्छन् । र, ती उभिएरै आफ्नो प्रचारकर्म पूरा गर्छन् । तिनको मुद्रा तामसी छ, स्वर उच्च र कर्कश । तिनको हाउभाउ उत्ताउलो छ, भन्ने काइदा अहंकारले भरिपूर्ण । ती परैबाट कुटुँलाझैँ गरी कुरा गर्छन् ।
आश्चर्य, उता सीतापाइलाको धराप भवनबारे पनि प्रभु यशु पूरापूर उदासीन ! भवनको अवस्थाबारे भक्तगण यशुलाई बेलैमा नसोध्ने, यशु भक्तगणलाई करुणाभावले भवनको जर्जर अवस्थाबारे नभन्ने
म्याक्सिम गोर्की जिजस क्राइस्टलाई प्रमिथस र गरिबाल्डीसँगै राखेर अब्बल दर्जाका शहीद मान्छन् । त्यस्ता क्राइस्टका उपासक वा भक्त हाम्रोमा यस्ता तोरिलाहुरे छन् !
हिन्दु धर्मका मठाधीशहरु आफ्ना पथको अतिरञ्जित मतसंख्याको धाकधक्कु लगाउँदै मुलुकभित्रका अन्य धर्महरुलाई हियाउँछन् । यसरी हियाइनेमा इसाई धर्म पनि पर्छ । लोभ देखाएर र केही चटाएर मानिसहरुको आस्थालाई इसाई धर्ममा ढालिन्छ भन्ने तिनको फत्तुर छ । बन्धु, अहिले आफ्नै कर्मले आफ्नो पोल पो खोलिदियो कि ! चामलका बोराको बाइबल केको सङ्केत हो ज्यू ? अनि काँचका पर्दाको त्यो अभद्र र उत्तेजक प्रचारवाजी ?
भूकम्पले ढालेको मानिस आफ्नै बुद्धिबल, बाहुबल र उद्यमबलले उभिन यत्नशील छ । तर, ती मानिसहरुप्रति सहानुभूति, समभाव र करुणा लेसमात्र पनि नभएका धर्म र अध्यात्मका यी छटेल व्यापारीहरु भने मानिसहरुलाई पराश्रय, पराधीनता र आत्महीनताको बाटोमा लगाउन यत्नशील छन् । यी स्वघोषित ज्ञानीहरु त चिनिएकै हुन् । यस्ता औतारीहरुलाई टेलिभिजनका पर्दामा बौद्धिक र आत्मिक प्रदूषण फिँजाउन ससम्मान ठाउँ दिने मालिकहरुलाई चिन्न पो गाह्रो पर्‍यो लौ !
सिद्धबाबामा पहिरो खस्दा गाडी पुरियो, दुई जनाको उद्धार